နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ကမောက်ကမ ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခု (PhD holder nowacabby)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:28 PM
:P August 19, 2009 at 1:43 PM
လင့်ကို မသွားခင် အော်ပစ်ခဲ့တာ..ဟိ
MGLUAYE August 19, 2009 at 3:49 PM
စထရိတ်တိုင်းမ်စ် လင့်က သွားမရဘူးဗျ... လုပ်ပါဦး.. :)
Unknown August 19, 2009 at 4:07 PM
same to Mg Lu Aye. :(
Ko Boyz August 19, 2009 at 4:10 PM
အဟက်...။ မယ်ဆင်တစ်ယောက် လင့်ခ်ကို မနှိပ်တာ သေချာတယ်။ ကိုမောင်လူအေး ပြောမှ သတိထားမိတော့တယ်။ လင့်ခ်ကို ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ခုပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
:P August 19, 2009 at 5:33 PM
အဲဒီလူရဲ့ လင့်ကို သွားပါသကောအေ...
အပေါ်ဆုံးက ပို့စ် ၃ ပုဒ် တိတိ ဖတ်ပြီးပါပြီ..
ကောမန့်တွေသာ များလွန်းလို့ မဖတ်နိုင်ပဲ ထားခဲ့တာ...
သတင်းစာ လင့်ကတော့ ဟုတ်တယ်.. မသွားရသေးဘူး...
ကာယကံရှင်ဆီသွားရင် ပြီးရောမဟုတ်လားအေ.. သူ့အကြောင်း သူများရေးတာနဲ့ စာရင် သူရေးတာက ပိုဖတ်ကောင်းမှာပေါ့... ဟင်း...။
Thandar Lwin August 19, 2009 at 6:52 PM
မြန်မာလို ပြန်ပြပါ... thks.
Rita August 19, 2009 at 6:55 PM
ဒါဖြင့် ညီလင်းညို လေးဘီးမောင်းတာ ဘာဟုတ်သေးလဲနော်။
အဲဒါတွေကြောင့် တို့တော့ phd လဲ မယူပါဘူး။
subuueain August 19, 2009 at 7:04 PM
အဲဒါကြောင့်တို့က A*မှာ မလုပ်ချင်တာ ဟီးဟီး။ မရတဲ့ စပျစ်သီးဝင်ချဉ်သွားသည်။ face book မှာ လယ်စိုက်တာဘဲကောင်းပါတယ်အေ။
မြစ်ကျိုးအင်း August 19, 2009 at 7:45 PM
ကိုပေါ August 20, 2009 at 12:23 AM
ကိုဘွိုင်းဇ်... သင်လည်း ပီအိတ်ခ်ျဒီမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်လည်း ပီအိတ်ခ်ျဒီမဟုတ်။ ဒီတော့ တက္ကစီမောင်းဖို့တောင် အရည်အချင်းပြည့်မှီပါလေစမသိ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး စီးပွားဖက်စပ် ထူထောင်ရအောင်။ မခင်ဦးမေဘလော့ဂ်မှာ တခါတင်တဲ့ နည်းလေ။ ဆယ်ပြားရရင်တောင် အမြတ်ရာခိုင်နှုန်း တရာလို့ ပြောလို့ရတဲ့နည်း။
ကိုဘွိုင်းဇ် သီချင်းဆို လေ့ကျင့်တော့။ ကျနော် တရုတ်တယောထိုးတတ်အောင် ကျင့်လိုက်မယ်။
mae August 20, 2009 at 3:22 AM
A*Star ဆို ရွံ့လွန်းလို့.. အဟတ်
jr.lwinoo August 20, 2009 at 12:00 PM
Ko Boyz August 20, 2009 at 12:08 PM
ဆက်တက်ပါ။ မတော် အာကာသယာဉ်မှူး ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်လဲ...။ အဟက်
ကြည် August 20, 2009 at 12:27 PM
သူ့အကြောင်း ( Dr Cai Ming Jie ) ဖတ်ပြီးတွေးနေမိတာတော့ အများကြီးပါပဲ။
Ko Boyz August 20, 2009 at 12:31 PM
သူ့အကြောင်းတော့ သေချာ မဖတ်မိသေးဘူး။ သူစင်ကာပူနိုင်ငံသားခံတာ အလုပ်ပြုတ်ပြီးမှလား၊ အလုပ်မပြုတ်ခင်လား မသိ။
နောက်ပြီး အခုလို သူ ဖြစ်သွားတာမှာ စထရိတ်တိုင်းမ် သတင်းစာက ဖော်ပြမှ သိရတယ်။ သူ့ ကန်ထရိုက်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တော့ သူကွန်ပလိမ်း မတက်ဘူးလား။ တရုတ်နိုင်ငံသားစလုံးပီအာ ဖြစ်နေသေးလို့ ကွန်ပလိမ်း မတက်ခဲ့တာလား ဆိုတာ စဉ်းစားနေတယ်။ စလုံးတွေဆို ကွန်ပလိမ်းတက်လိုက်မယ် ဖြစ်ခြင်း...။
Life is for Success August 20, 2009 at 6:53 PM
i think this is coz of A * rules and regulation, when u start to work all the way working is contract basic. it is very clear, when they like u they will extend for u. otherwise they do not continue ur contract.... but their pay and other bonus is really reallyalot..... that why...........
evergreen August 21, 2009 at 9:49 AM
Thanks. I gotalot of knowledge such kind of your blogs.